60 Saraal oo tababar Milateri loogu qaaday dalka Turkiga (Wasiirka Gaashaandhigga oo sagootiyey) - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/60 Saraal oo tababar Milateri loogu qaaday dalka Turkiga (Wasiirka Gaashaandhigga oo sagootiyey)
60 Saraal oo tababar Milateri loogu qaaday dalka Turkiga (Wasiirka Gaashaandhigga oo sagootiyey)
60-ka mid ah Saraakiisha Ciidammada Xoogga Dalka ayaa maanta Tababar loogu qaaday Dalka Turkiga sida uu sheegay Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed.
“Waxaan Maanta Garoonka Aden Cade ka sii Sagootiyay Saraakiil Tababar loogu qaaday dalka Turkiga Tiradooda waa 60 Sargaal oo ka Tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Gaar ahaan Saraakiishii iyo Saraakiil Xigeenadii ka Qalin jabisay Kuliyada Tababarada ee Turki Som”.ayuu yiri Wasiirka Gaashaandhiga.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Saraakiishan maanta Tababarka loo qaaday ay isugu jiraan Layli Saraakiil iyo Saraakiil Xigeen, Hogaanka Maamulka Ciidanka Xoogga Iyo Saraakiil kale oo loo qaaday Tababar gaar ah oo kumaandoos ah.
Wasiirka Gaashaandhigga ayaa ugu dambeyn sheegay in Dowlada Federaalka Soomaaliya uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ay ka go’an tahay Dib-u-dhiska Ciidanka Xoogga Dalka, wuxuuna kaga mahad celiyay Dowlada Turkiga taageerada Joogtada ay siiso Horumarinta Ciidanka Soomaaliya.
SAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo kulamo & is-dhexgal la yeeshay Shacabka Magaalada Marko
Dowladda Somalia oo taageero Garab-istaag ah u muujisay Boqortooyada Sacuudiga (War-saxaafadeed)
Ciidanka DANAB oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Gobolka Baay
Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha ka guddoomay safiirro reer Yurub ah